Jaaliyadda Soomaaliya oo Xildhibaano afur ugu sameeyay Johannesburg-Sawirro – Radio Muqdisho
Jaaliyadda Soomaaliya oo Xildhibaano afur ugu sameeyay Johannesburg-Sawirro
Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Johannseburg ayaa kulan afur sharafeed la qaadatay Xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka Soomaaliyeed oo dalkani u jooga shir loogu hadlaayo Dastuurka, waxayna isugu jiraan Xildhibaanada Barlamaanka u qaabilsan Dastuurka, Gudigga madaxabanaan ee dib u eegista iyo hergalinta Dastuurka iyo xubno ka socda Wasaaradda Dastuurka.
Ugu horeyn Jaaliyadda Soomaalida ee qeybaheyda kala duwan ee kulankaasi ka soo qeybgalay ayaa ugu mahadceliyay fursadda ay siiyeen madaxda qaranka inay la kulmaan Jaaliyadooda iyo sidoo kale safaaradda iyo guddiga Jaaliyadda oo isku xilqaamay inuu kulankan qabsoomo.
Suldaan Maxamed Cabdi Qooqaani oo ka mid ahaa Odayaashii madasha ka hadlay ayaa la dardaarmay Xildhibaanada,waxa uu yiri.
“Aniga waxaan rabaa inaan sedex shey idin sheego,kow inaad Soomaalida iska reebtaan waayo daacayado badan bay idinku heysaa,qodobka labaad inaad kala reebtaan waayo mida yiraahdo xuduuda baa laguna soo xadgudbay, midda kale inaad cadowga ka dhicisaan waayo waxaan maqalnaa xeebihii waa la qaatay xuduudihii waa la qaatay”.
Qunsalka ahna Sii hayaha Safiirka Safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika,Mudane Maxamed Cali Mire (Nabadoon) isna ka hadlay goobta ayaa yiri”Waxaan caawa ku faraxsanahay dadka halkaan jooga in ay yihiin mutacalimiin iyo dad dowladihii hore u soo shaqeeyay,dad ganacsata ah dad Arday ah iyo dhalinyaro soo korayso oo aan nasiib u yeelan Dastuur iyo Dowlad inay arkaan,waxaan ka Safaarad ahaan ku faraxsanahay dadkii xaqa u lahaa su’aala inay fadhiyaan aadna ugu qeyb qaadataan”.
Maxamed Cabdalla sii-haya gudoomiyaha guddiga madaxbanaan ee Dastuurka oo ka hadlay gudigaas waxa u qabsoomay iyo meesha ay wax marayaan.
“Marka ugu horeysa waxaan tixgalin doona Umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan,waxaan tixgalinaynaa diinteena Islaamka,anaga dad Muslimiin ayaan nahay qawaawiinteena waxay ku dhisantahay Shareecada Islaamka,maxaa yeelay anaga waxaan heysanaa Manhalka ama waxaan kasoo qaadano waa afar,waa Kitaaballah SWT waa sunadda Rasuulka SCW waa qiyaasta iyo Ijmaaca,afartaas Culumada way isku raaceen meesha laga soo qaado,anaga Shareecada Islaamka ayaan ku dhisananay,Diinta Islaamkane waa la dhafarta Umadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto maxaa yeelay waxaan nahay Umad Islaam ah”. Ayuu yiri Maxamed.
Xildhibaanad Fowsiyo Xaaji Aadan,Wasiirkii hore ee Arimaha Dibadda oo iyadana ka hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsantahay inay la kulanto Jaaliyadda waxayna amaan badan u jeedisay ayadoo dhanka kalene sheegtay in Dalkeena yahay Dalka Aduunka ugu qanisan,waxeyna ugu baaqday Ganacsatada Soomaaliyeed inay Dalka dib ugu laabtan oo ay maalgashadaan.
Kulankan ayaa sidoo kale Jaaliyadda su’aalo u badnaa Dastuurka waxa ay weydiinayeen Xildhibaanada iyo Wasiirka Dastuurka.
Ganacsade Saneey Madaxeey Gacamey,Sheekh Axmed Dheere Afhayeenka Hay’adda Culumada Al Bayaan,Pro C/qaadir Cigaal iyo C/raxmaan Maxmuud Caana Mac oo iyaguna ka mid ahaa dadkii su,aalaha weydiyay ayaa su,aalahadooda u badnaa Dastuurka uu Dalka yeelanayo.
Ugu Dambeyntii Wasiirka Dastuurka Mudane Xuseen Maxmuud Sh Xuseen oo goobta ka hadlay ayaa ayaa ka qeybgaliyaasha ugu mahadceliyay sida wanaagsan oo ay ugu heelan yihiin arimaha ku saabsan dastuurka.
“ Dastuurkan la idinkama yeelanayo mid Shacabka Soomaaliyeed meel walbuu joogo uu qeyb ka noqduu noqonayaa,ra’aygiina iyo wax walbana waad ka qeybgalaysan,ma ahan waad ka qeybgalaysaan mana ahan Dastuur cid gaar ah loogu daneynanayo Shacabka Soomaaliyeed oo dhanaa isla”. Ayuu yiri Wasiirka.
C/qaadir Axad Warbaahinta Qaranka Johannseburg,Koonfur Afrika.
Wasiirka Gaashaandhigga oo dalka dib ugu soo laabtay-Sawirro